Abantu ngaphezulu kweZithuba, abantu bangaphezulu kwezibambo | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 7, 2013 Douglas Karr
IHubSpot iye yazisa Inbox yeNtlalo, Isicelo esitsha esidibanisa ukujonga imithombo yeendaba kwezentlalo kunye nokupapasha kwindawo yogcino lwedatha yeHubSpot, evumela abathengisi ukuba benze umbono ohlukanisiweyo wentsebenzo yentlalo yezikhokelo zabo, abathengi kunye nabashumayeli abakhulu. Umdibaniso omtsha unciphisa ingxolo enxulunyaniswa nokuphulaphula imidiya yoluntu, ukwazisa iinkampani kubantu abaphambili abadinga iimpendulo, kunye nokubonelela ngemeko yokunxibelelana nemithombo yeendaba kwezentlalo, ukubuyisela amaqhinga aphezulu kunye nokuphazamisa nabantu abathandayo.
Izibonelelo eziphambili zesicelo esitsha zibandakanya:
Umdibaniso noGcino lwedatha yoQhakamshelwano lukaHubSpotI-HubSpot izakuthelekisa ngokuzenzekelayo ithemba, ukukhokelela, okanye iakhawunti yabathengi ye-Twitter esekwe kwi-imeyile kwaye inyuse irekhodi elipheleleyo lokunxibelelana kwabo nenkampani yakho ukuza kuthi ga ngoku, ukuze ukwazi ukwenza iimpendulo zakho ngokweziqulatho ezongezelelweyo kunye nomxholo. Ibhokisi engenayo yezeNtlalontle iya kuthi iflegi nakweyiphi na i-tweet evela kumntu onegama elifanayo njengonxibelelwano olusuka kwindawo yogcino lwedatha, ukuze uqhubeke nokwakha iiprofayili zonxibelelwano.
Icandelo lokubeka iliso kunye nezilumkisoUmceli mngeni omde kubarhwebi ngumthamo omkhulu wedatha ekufuneka beyijongile yonke imihla. Ibhokisi engenayo yezeNtlalontle yenza ukuba iinkampani zikhawuleze kwaye ngokulula ziphakamise izabelo zemidiya yoluntu zabantu abaphambili, ukuba zichonge ngokulula inqanaba lobomi lomntu onikwe isixhobo se-Inbox yeNtlalontle, kunye nokuseta izilumkiso ngokubhekisele kwizinto eziphambili zebrendi yakho, ukusuka kudidi kunye nokujonga ukhuphiswano ukulandelela izikhombisi zokuthenga eziphambili.
Ukusebenza ngokukuko kunye nokuSebenza ngaphandle kokuThengisaUlwakhiwo kunye nokusebenziseka kwe-Inbhoks yezeNtlalontle yenza ukuba kube lula kwaye kungabinamthungo kubathengisi kunye neenkonzo zokunyusa umgangatho wesicelo. Ngokukodwa, izaziso zesoftware ezivumela abaphathi bezentengiso ukuba bafumane izaziso zokutyhala ngokusekwe kwizikhokelo zabo ezithile. Umdibaniso webhokisi yangaphakathi kwi-imeyile kunye nesixhobo se-imeyile sikaHubSpot ikwavumela abasebenzi ukuba baphendule ngokuthe ngqo kwimibuzo yabathengi kwi-Twitter nge-imeyile ebhalwe igama.
Uhlalutyo olusebenzayoAbathengisi basasokola ukufumana ubungakanani kutyalo mali lweendaba zentlalo, kodwa i-Inbox yeNtlalontle yeHubSpot ivumela abathengisi ukuba babone ukuba zingaphi iindwendwe, izikhokelo kunye nabathengi abenziwe yitshaneli nganye yemidiya yoluntu. Ukongeza, abasebenzisi abanakubona kuphela inani elipheleleyo lokucofa okanye ukusebenzisana nesabelo ngasinye, kodwa namagama oqhakamshelwano ngalunye olubonakalise umdla kule tweet.
I-inbox yezentlalo yenza amajelo eendaba ezentlalo abe liqela lezemidlalo. Amaqela enkxaso anokulandela izicelo zenkonzo nge-imeyile; Abathengisi banokutshintsha umnxeba kwisenzo kwiphepha ngalinye ithemba okanye ukukhokelela kutyelelo ngokusekwe apho akhoyo kumjikelo wobomi babathengi babo; kwaye amaqela okuthengisa anokubeka imithombo yeendaba zentlalo kukhokelela kumkhankaso ofanelekileyo wokukhulisa umkhankaso. Ukongeza ekubeni ngumntu, i-Inbox yeNtlalontle ibonelela ngeseti ebanzi yezixhobo ezinezibonelelo ezandisela ngaphaya kokuthengisa kubandakanya ukuthengisa kunye neenkonzo.
Ukukhuthaza ukwazisa, Hubspot Ukwabelane ngale infographic kwintengiso yemidiya yoluntu.
tags: hubspothubspot kwimidiya yoluntuinbox yemidiya yokuncokolaSocial Media MarketingIndlela yemidiya yoluntu
Meyi 9, 2013 kwi-4: 50 AM
Isixhobo esihle kakhulu esivela kwiHubspot, kuya kufuneka uzame oku kwaye uzibonele ngokwakho! Iposti enkulu!